Faminaniana sibilina - Wikipedia
Ny Faminaniana sibilina na Faminaniana pseodo-sibilina dia fanangonan-dahatsoratra miisa 14 tsy misy ifandraisany voasoratr'olona tsy fantatra tamin'ny fotona samihafa. Na dia nosoratana toy ny tononkalo amin'ny teny grika aza ireo lahatsoratra ireo dia isan'ny literatiora apokaliptika jiosy na jodeo-kristiana manohitra ny fahefam-panjakana romana.
Ny sasany amin'ireo lahatsoratra ireo dia mitantara zava-nitranga tany amin'ny Andro Taloha. Ohatra amin'izany ny faminaniana faha-13 izay manokana andalan-tononkalo 60 amin'ny 173 izay milaza ny fanjakan'ny emperora Filipo Arabo.
Ny mpahay tantara jiosy Flavio Josefa tamin'ny faran'ny taonjato voalohany dia manao tonontsiahy ny ampahany amin'ny boky faha-3 momba ny Tilikambon'i Babela. Ilay mpandaha-teny fiarovana ny finoana kristiana atao hoe Atenagorasy avy any Atena, ao amin'ny lahatsoratra nosoratany hoe Supplique au sujet des chrétiens ho an'ny emperora Marko Aorelio (176), dia manao tonontsiahy izany ampahan-dahatsoratra izany ara-bakiteny, sady miala tsiny noho ny fahafantaran'io emperora io tsara ilay lahatsoratra.
Ny Rain'ny Fiangonana (na Aban'ny Eglizy) dia mampahatsiahy ankolaka ireo faminanian'ny Sibila ireo: i Teofilo avy any Antiokia (taona 180), i Klemento avy any Aleksandria (taona 200), i Laktantio (taona 305), ary i Md Aogostino (taona 400) dia miseho ho mahalala tsara soratra pseodo-sibilina, izay indraminy ampiasaina na hazavainy, amin'ny alalan'ny fanatsofohana izany etsy sy eroa ny fitenenana hoe "zanak'Andriamanitra". Ny ampahan-dahatsoratra sasany dia tsy ho nanana intsony raha tsy teo ny fanaovan'ny Rain'ny Fiangonana azy ireo tonontsiahy.
Na dia izany aza, araka ny Catholic Encyclopedia, "... ny fihen-danjan'ny fivavahan'ny panompo sampy sy ny fanjavonan'izany dia nahatonga azy ireo ho very lanja ka nihena ny famakiana sy ny fandikana azy ho maro, na dia fantatra sy natao tonontsiahy aza izany ireo nandritra ny Andro Antenantenany, na tany Atsinanana izany na tany Andrefana".
Tsy isan'ny kanonan'ny Baiboly io lahatsoratra io na amin'ny fiangonana inona na amin'ny fiangonana inona fa voasokajy ho apokrifa na pseodepigrafa.
↑ Ny Sibilina dia mpaminanivavy izay mamantatra ny zavatra tsy fantatry ny olon-tsotra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Faminaniana_sibilina&oldid=978184"
Voaova farany tamin'ny 5 Desambra 2019 amin'ny 01:33 ity pejy ity.